General - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 3)
Ọchịchọ ịmata ụwa
Planetwa anyị buru oke ibu na enwere ọtụtụ ịmata ihe n'ụwa na-enyere anyị aka ịghọta ọdịbendị ...
Mmiri nke Covadonga na Asturias
Anyị na-egosi gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na mpaghara Covadonga Lakes dị na Picos de Europa, na Onyeisi nke Asturias.
Denye ndị enyi ka ha gaa Berlin: Flight + hostel maka euro 80
Onyinye nke gunyere njem njem na njem abalị atọ maka euro 80 na Berlin bụ ihe anyị na-agaghị echefu.
Prague Astronomical Clock bụ akara obodo, mpako na amara nke obodo. Gụọ ihe ndị ...
Odighi ego nke uwa
Enwere ọtụtụ mba na ya mere ọtụtụ ego. Dị ka taa ụfọdụ mba dị na Europe kesara ...
Ahịa ekeresimesi kacha mma
Anyị na-egosi gị kacha mma Christmas ahịa na Europe, na obodo na obodo na-ebi Christmas oge zuru ezu.
Agbanyeghị ịrị elu azụmaahịa ọnlaịnụ, ahịa ọdịnala na-ejigide amara ahụ nke na-eme ha ụdị ebe a ...
Otu izu ụka na Milan nwere ike ịdị ọnụ ala karịa ka ị chere. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị onyinye a nke abalị atọ tinyere ụgbọ elu gụnyere.
Ihe ị ga-ahụ na Venice
Anyị na-egosi gị isi ihe nwere mmasị na obodo Venice, obodo a maara maka ọwa mmiri ya na ihe ncheta ya.
Ọbịbịa nke obodo Budapest na-agagharị na Buda Castle, nke a makwaara dị ka Obí ...
Obodo Zagreb bụ isi obodo Croatia ma nye anyị ọtụtụ ebe mmasị na obodo ochie ya, nke anyị ga-achọpụta maka gị.
Anyị na-enye gị nkọwa niile iji nwee ike ịga leta Plitvice Lakes Natural Park na Croatia, gburugburu ebe mara mma.
Chọpụta ihe niile gbasara ọmarịcha Ememme Nzuzo na obodo Coruña nke Boimorto, n'ime ime obodo nke na-adị ndụ na Septemba ọ bụla.
Spanishlọ ihe ngosi nka Spanish kachasị ama na Instagram
Nyochaa nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie Spanish kachasị na Instagram. N'ihi ọrụ ndị ọrụ kwuru, ha abụrụla isi ihe a ga-eleta.
Ring na afọ ọhụrụ na Saịprọs
Ka nwere oge iji nye onwe gị nnukwu njem. Oku na afọ ọhụrụ na Saịprọs! Agaghị echefu echefu njem ma dị ọnụ ala karịa ka i chere.
Tiketi na Vatican Museum
Emi odude ke esịt Rome, nsinsi obio, Vatican edi n̄kpri-n̄kan idụt ke Europe ye ...
Ihe nzuzo na nkọwa nke kọlụm Trajan
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Trajan's Column, nke dị na Rome, nke na-enye bas-reliefs na-akọ akụkọ agha Trajan.
Ihe ị ga-ahụ na New York
Anyị na-egosi gị isi ihe nwere mmasị na New York City, site na Statue of Liberty na Building State State.
Senda Viva, ogige ezumike ezinụlọ kachasị ukwuu na Spain
Na-esote Bárdenas Reales bụ Senda Viva, ogige a raara nye ezumike ezinụlọ a ghọtara dị ka nke kachasị ...
Black Friday: ụbọchị 4 na Malta na ọnụahịa kacha mma
Black Friday na-ahapụ anyị nnukwu onyinye dị ka nke a. Nke a bụ ụgbọ elu ma nọrọ na Malta maka ụbọchị 4 maka ọnụahịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọchị ọchị.
Spas kacha mma maka izu ike
Anyị na-enye gị ụfọdụ akara ngosi banyere spa kachasị mma na obodo okpomọkụ na Spain na Europe, tinyere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ileta ma zuo ike.
Obodo Andorra mara ama maka ugwu ugwu ya na ebe ndi ozo na-eme ski, ma o nwere otutu ihe ndi ozo, dika ulo ngosi ihe mgbe ochie ya.
Ihe ị ga-ahụ na Loire Valley
Anyị na-egosi gị obodo ndị bụ isi na Loire Valley, yana ya mara mma ma dị mkpa ụlọ ndị dị n'ime nnukwu ụlọ ụzọ.
Gagharị mba ọzọ: ebee, na mgbe na ego ole
Na-agagharị mba ọzọ ma chọọ iji ekwentị gị? Chọpụta ihe njegharị bụ, ego ole ọ bara, yana ihe ị kwesịrị iburu n'uche iji zere ụjọ na ụgwọ gị.
Choo njem maka ekeresimesi di egwu
Anyị na-enye gị ụfọdụ echiche n’afọ a iji nwee ike ịnụ ụtọ ekeresimesi dị ịtụnanya na ebe ị ga-enweta oge a n’ụzọ pụrụ iche.
Uniquezọ njem njem atọ pụrụ iche na Galicia
Choputa uzo ato di egwu na puru iche na Galicia, odi nma ka ndi mmadu mara ya.
Ndị ga-anọnyere ezinụlọ na Madrid ụbọchị ole na ole ga-achọ ịme atụmatụ na ụmụaka, ebe ...
Ngwaọrụ eletrọnik m ọ ga-arụ ọrụ na mba ọzọ?
N'ime ụwa ejikọtara ọnụ ọ na-esiri ike ịga njem na-enweghị ngwaọrụ kọmputa anyị: ekwentị mkpanaaka, mbadamba, laptọọpụ, ese foto ...
Crugbọ mmiri bụ nnukwu ihe ọzọ iji tụlee maka njem ezumike nke ezumike, ebe ọ na-enye ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka na ebe aga.
Trujillo bụ obodo Extremaduran nke nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme, ọ bụ ya mere o ji nwee obí eze, ụka na ọmarịcha Plaza Mayor.
Anyị na-aga Budapest maka euro 40
Ọ bụrụ na ị na-eche ịgbanahụ ụbọchị ole na ole, nke a bụ ohere kachasị mma. Flightgbọ elu na Budapest maka euro 40 na ebe obibi dị ọnụ ala karịa. Ka a pụọ?.
Isi ihe ncheta nke Rome
Ihe ncheta nke Rome di otutu ma n’enweghi obi abua, edeputara nke oma ka ighapuru ndi ozo na njem.
Gbọ elu na-enye Venice naanị euro 60
Ihe a na-enye ụgbọ elu ị na-anaghị ahụ kwa ụbọchị. Yabụ, ọ bụrụ n 'ị na-eche ịla Venice, lee oke ohere gị. You ga-atụ uche ya?
America bụ kọntinent juputara na ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme na akụkụ etiti nwere nnukwu ihe nketa Mayan nke na-ejedebeghị na Mexico, dị ka ụfọdụ ndị Guatemala na-enweghị uche bụ ala jupụtara n'ọdịnala na omenala, ụfọdụ sitere na ndị Hispanic tupu oge ochie, ndị ọzọ ketara site Spain. Jụ onwe gị na ha!
Atụmatụ maka izu ụka na ụmụaka
Atụmatụ izu ụka na ụmụaka bụ maka ezinụlọ niile iji nwee obi ụtọ, yabụ na anyị na-ewepụta echiche dịgasị iche iche ma na-atọ ọchị.
Warsaw bụ isi obodo Poland ma nwee ọtụtụ akụkọ ntolite n’azụ ya, mana ọ nwekwara ọtụtụ ihe ị ga-enye ndị njem nleta.
Njem ebugharị na Bangkok maka obere ego karịa ka ị chere
Anyị na-ahapụrụ gị onyinye pụrụ iche nke ebe njedebe ya bụ Bangkok. Were otutu ego juo otutu ulo elu karịa nke inwere n’uche. Echefula ya!.
Flight + ụlọ nkwari akụ na Tenerife maka euro 174
Jiri ohere a mee nke ị ga-anọ ụbọchị atọ na Tenerife maka euro 3, ebe ụgbọ elu na ụlọ nkwari akụ ahụ esonyela.
Site na ngwakọta nke ọdịbendị, na usoro nke were ọtụtụ narị afọ, ọdịbendị pụrụ iche mụrụ nke nnukwu ...
Omenala Ọstrelia nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na England, ebe ọ bụ obodo a na-achị ya nke nwere ọtụtụ ndị mbata na ngwakọta ngwakọta.
Omenala nke Germany na-agwa anyị ọtụtụ ihe gbasara ụdị ndụ ha na omume ndị German, ihe dị mkpa ịga ebe ahụ.
Ruo oge ụfọdụ, ikekwe afọ iri ugbu a, South Korea nọ na map ụwa nke ọdịbendị ndị ama ama. N'ihi gịnị? Maka ụdị egwu gị, ị ga-aga South Korea? Sure doro anya na ị na-ahụ ihe nkiri na k-pop n'anya ma tupu ị banye ebe ahụ, kedụ maka ịmụ ihe banyere omenala ndị Korea?
Mgbe anyị na-akwado njem enwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị ichebara echiche ka ihe niile wee ...
Omenala nke Ireland bara ọgaranya ma dịgasị iche iche, agwakọtara ya na ọdịbendị Celtic oge ochie ka na-adịgide.
Ajentina bu obodo ndi kwabatara, n’agbanyeghi na odidi ala ya sara mbara nke na dabere n’ebe ị gara ị ga-enwe ike ịbịakwute omenala na ị na-aga Argentina ma chọọ ịmatakwu? Marazie ụfọdụ omenala ha, nri ha, ị typicalụkarị mmanya, omume ha na omenala ha.
Japan bụ ebe kachasị amasị m, enwere m ike ịsị ebe m nọ n'ụwa n'azụ obodo m. Ahụrụ m Japan n'anya nke ukwuu nke mere na m nọrọ ezumike ezumike atọ a gara aga. Are na-aga Japan? Chọpụtazie omenala ndị Japan kachasị mkpa iji mata ihe ị ga-eme. Kedu ndị ị na-enweghị ike ime!
Ọkpụkpụ gastronomy nke Mexico
N'ihe banyere nri, ndị Mexico nwere okwu na-ekwu "afọ zuru ezu, obi obi ụtọ." Ọnweghị ihe…
Ihe nkiri sịnịma na usoro ihe nkiri America egosila anyị omenala nke ndị America n'ọtụtụ oge. Anyị nwere ike ịbụ ...
Gastronomy nke Italia
Gastronomy nke Italy nwere nri efere gafee ụwa na ewu ewu ha yana ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Ọrịa afọ nke France
France nwere akụkọ banyere gastronomy, karịa njikere ịnabata gị ka ị nụrụ ụtọ ya. Site na achịcha dị iche iche kachasị mma ruo na nke dị mfe. Are na-aga France? Na mgbakwunye na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na nnukwu ụlọ e nwere gastronomy ya. Fracnese isi nri magburu onwe ya na ụtọ na nnu. Iri!
Typicaldị uwe ndị a na-ahụkarị nke obodo bụ omenala na akụkọ ihe mere eme banyere ya. N'okwu Colombia, akụkọ ifo ...
Ogige ntụrụndụ Nacedero del Urederra dị na Navarra na-enye anyị ohere okike nke nnukwu ịma mma iji soro ezinụlọ anyị nwee obi ụtọ.
Dị ejiji ndị Italytali
Enwere nhọrọ buru ibu n'ụdị ejiji Italiantali, yana iberibe site na Renaissance, ume Rome, na akwa Venetian.
Bọchị anọ na New York maka obere ego karịa ka ị chere
Anyị na-ewetara gị onyinye maka njem ị ga New York, maka ọnụahịa dị ala karịa ka i chere. Njem ụbọchị anọ nke ga-eme ka ị daa n'ịhụnanya.
Uwe ejiji ndi obodo, dika gastronomy ma obu egwu, bu ihe ngosi nke ndi mmadu. Na…
Obodo Portuguese nke Vila Real de Santo Antonio bụ ebe dị jụụ na osimiri mara mma nke dị na mpaghara Algarve.
Gaa na ihunanya Paris maka euro 17
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga njem Paris maka ọnụ ala dị ọnụ ala, echefula onyinye anyị ga-egosi gị taa. Ma ụgbọ elu ahụ na ụlọ nkwari akụ ahụ ga-eme ka ị kwenye.
Gbaga London maka otu ụbọchị maka euro 25
Ugbu a ị nwere ike ịgbaga London maka otu ụbọchị naanị 25 euro. Ohere puru iche nke n’achara ida!
Gaa na Amsterdam maka naanị 65 euro
Ugbu a, ị ga-efega Amsterdam na ihe pere mpe. Ga-enwe otu izu iji chọpụta akụkụ ya niile. Ka a pụọ?.
Gaa na Mallorca naanị euro 12
Mallorca bụ otu n’ime ebe ị ga-anọ ezumike gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụ ụgwọ dịkarịrị ala, echefula nnukwu onyinye a ụbọchị asatọ.
Chocolate Museum, kpochapụwo n'ọtụtụ mba
Nwee obi ụtọ na Chocolate Museum, ụlọ ọrụ dị n'ọtụtụ mba ma nwee ọpụpụ ma ọ bụ ngosi dị iche iche iji soro ezinụlọ ahụ kerịta.
Njem ụbọchị ise na July nwere ike ịbụ nnukwu mmefu. Mana ọ bụghị ọzọ, anyị achọtala ọnụahịa dị mma iji nwee obi ụtọ na Prague, obodo na-enweghị atụ.
Ogige Ubi nke Sierra Magina na Jaén
The Sierra Mágina eke park na-enye anyị eke Okirikiri ala nke mara mma nke ukwuu, hiking ụzọ ụkwụ na obere obodo nta na castles.
Basque pinchos, ọdịnala dum nke gastronomic
Basque pinchos bụ akụkụ nke ihe na-adọrọ adọrọ nke na-akpali ọtụtụ ndị njem nleta ịga leta Obodo Basque mara mma, na-eri nri na-atọ ụtọ nke nwere ike ịtọ ụtọ obere obere.
Gaa na Caldera de Taburiente
Na-aga na Canary Islands n'oge okpomọkụ a? Wee gagharịa n’agwaetiti La Palma ma mara ezigbo egwu Caldera de Taburiente. O buru ibu ma maa mma!
Rome n'oge ọkọchị, jiri ohere ụgbọ elu na euro 60
N'oge ọkọchị anyị nwekwara ike ịme njem maka obere ego karịa ka anyị chere. N'okwu a, anyị ga-aga Rome, ụbọchị ole na ole, na euro 60. Nwee onyinye dị ka nke a n'ihi na ọ gaghị adịte aka iche echiche ugboro abụọ. Kwadebe akpa gị!
Gbọ elu na ebe obibi abalị abụọ na Marrakech maka euro 60
Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ ịla ezumike, oge kachasị mma eruola. Thegbọ elu na ebe obibi abalị abụọ na Marrakech ga-efu gị euro 60. Nke a ọ bụghị ụzọ dị mma iji dozie usoro ị na-eme ụbọchị ole na ole?
Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na Rome na ụbọchị 3
Ga leta Rome n'ime ụbọchị atọ siri ike, mana anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịkọwa dị ka ihe dị mkpa iji nwee ike ikpuchi ihe niile.
Wadi Rum, nleta nke ọzara Jọdan
Ọzara Wadi Rum dị na Jọdan ma bụrụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya dị na Petra, ọzara nke a ga-eme ọtụtụ ọrụ.
Gaa Lakes Somiedo na Asturias
Osimiri Somiedo dị na Asturias, na Somiedo Natural Park ma nwee ike ịhụ ekele maka ụfọdụ ụzọ ụkwụ mara mma.
Otu n'ime ihe ụtọ nke oge opupu ihe ubi na-eweta bụ ịnọdụ ala na mbara ala ị haveụ ezigbo mmanya ...
Ọ bụrụ na ịmabeghị Enchanted City nke Cuenca, ị na-efu njem njem na-atọ ụtọ site na oghere okike nke na-enye nnukwu usoro okwute.
Obodo Leuven dị nanị kilomita ole na ole site na Brussels ma bụrụ njem nleta zuru oke iji mara obodo mahadum a nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye.
Ihe ị ga-ahụ na Verona
Obodo Italiantali nke Verona abụghị naanị ebe Romeo na Juliet kwesịrị ibi, mana ọ na-enye ọtụtụ nhọrọ nke ncheta na ụka iji leta.
Agwaetiti Lofoten, paradaịs na Norway
Na-eme atụmatụ ihe pụrụ iche maka Ista? Kedu ka ị ga - esi gaa Norway? N'ebe ahụ, n'elu Arctic Circle, bụ agwaetiti Lofoten mara mma.
Sintra, ihe ị ga-eme ma mee n'obodo Portuguese
Chọpụta ihe ị ga-ahụ ma mee na obodo Portuguese nke Sintra, nke dị nso na Lisbon, obodo jupụtara na obí eze na oghere ndị mara mma.
Na 2018 a ga - eme ihe ngosi buru ibu banyere onu ogugu nke JRR Tolkien na Oxford nke n’eme ka ndi mmadu ...
Thewa na-eme ememme Afọ Ọhụrụ 2018 nke China n'ụdị
Fridaybọchị Fraịdee gara aga ndị obodo China mere ememme afọ ọhụrụ, kpọmkwem 4716 dịka kalenda ya, bụ ụbọchị ezumike kachasị ochie ...
Na Peru, n'etiti obodo Nazca na Palpa, otu n'ime ihe omimi kachasị ewu ewu nke ihe niile ...
Kaadị Gold American Express, otu nke kachasị mma maka njem, ma lee, anyị na-agwa gị ọtụtụ uru ị ga-enweta na ya.
Site na nkume mbu emere na Ọktoba 1961 ụbọchị nke Virgen del Pilar ruo taa, ndị ...
Ndị a bụ ngwa 5 ga - enyere gị aka ịhazi njem gị: njem ọhaneze, ihu igwe, ebe obibi, onye ntụgharị na aro maka nleta.
Chọpụta ụfọdụ ebe kachasị mma na Europe maka njem maka ịchọ oke osimiri ndị nwere mmiri doro anya.
Y'oburu na enwere egwuru-egwu di elu rue udiri ihe nke uwa na otutu nde ndi n'agba gburugburu uwa bu ...
CNN bipụtara nso nso a ndepụta nke ebe 12 ndị njem nleta kwesịrị izere mgbe ha nọ ezumike na ...
Ugwu Corrubedo a di na Galicia, na obodo Ribeira na ala gbara osimiri okirikiri ma nye ebe ndi mara mma.
Nwetụbeghị mgbe ị rọrọ nrọ ịga njem na Azores?
Taa, anyị ewetara gị ọmarịcha njem njem na Azores Islands. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ mgbe ọ bụla ị ga-aga njem ha, nke a bụ ohere.
Na Jenụwarị 15, Ryanair tinyere iwu iwu mgbochi ọhụrụ ya, nke na-agaghị ekwe ka ibugo ihe ọ bụla ...
Okporo ụzọ ọkụ ga-achịkwa ịnweta St. Mark si Square site na 2018
Ogige St. Mark bụ, n'ezie, akara ngosi akụkọ ihe mere eme nke Venice. Kwa afọ ihe dị ka nde mmadụ iri anọ ...
Icelọ oriri na ọ Iceụ are are a interesting interesting interesting we can find more and more, fọrọ nke nta niile kere maka oge oyi.
Ọ dị ịtụnanya na nri amụrụ iji mee ka agụụ nke ọnụ ọgụgụ ndị na-enweghị nsogbu na Naples gabiga ...
Isi ihe kpatara na anaghị agakarị njem
N'isiokwu anyị taa, anyị na-ewetara ụfọdụ isi ihe kpatara ịghara ịga njem ọtụtụ mgbe karịa ka ndị Spain na-enye. You so n'ime ha?
Onyinye 10 bara uru maka ndi njem
Maka ndị gị na ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị ndị njem, nke a bụ ndepụta onyinye iji mee ka njem gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ.
Gaa Oslo, ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway II
Anyị na-egosi gị ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ị gbakwunye na nleta gị n'obodo Oslo, ebe jupụtara na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie yana ụfọdụ ntụrụndụ pụrụ iche.
8 ice rinks iji nwee obi ụtọ na skating na Madrid maka ekeresimesi
Na ekeresimesi a, ọtụtụ ezinaụlọ na-achọ iji ohere ezumike nke ụmụ ntakịrị ha mee ihe ọchị na atụmatụ dị iche iche ọnụ. Y ...
Malite afọ na Paris na obere onyinye a
Taa, Christmas Eve, anyị na-ewetara gị onyinye ezumike iji kwụsị 2017 wee bido 2018 n'ụzọ dị iche: Bido afọ na Paris na obere onyinye a.
Kedụ ka esi agba ekeresimesi n’ụwa?
Ọ bụ Disemba 24, abalị ekeresimesi. Gburugburu ụwa, ihe dị ka nde mmadụ 2.200 bụ ...
Chọpụta ihe ị ga-ahụ na ime na isi obodo Norway, Oslo. A obodo jupụtara na ngosi ihe mgbe ochie na ọmarịcha nleta-eme.
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ezumike nke enwere ike ịnụ ụtọ n'oge ekeresimesi, gaa ebe ndị na-ebi ụbọchị ndị a n'ụzọ pụrụ iche.
Mara mgbe ochie kọfị ubi nke Cuba, akụkọ ihe mere eme na flavors
Na-aga Cuba? Anọla n'ụsọ osimiri, mee njem nlegharị anya gburugburu ebe obibi! Na Cuba enwere ubi kọfị ochie ị ga-eleta mgbe ị na-agagharị n'okirikiri ala.
10 ahụkarị Christmas Grafica na Spain
Mgbe anyị na-eme njem enwere ụzọ dị iche iche esi amata obodo, site na akụkọ ntolite ya, akụkọ ọdịnala ya, nka ya ma ọ bụ ya ...
Anyị na-egosi gị nleta asatọ dị mkpa iji mee na agwaetiti Sardinia mara mma, site na obere obodo gaa nkwụnye ego.
Chọpụta nleta ole na ole dị mkpa n'àgwàetiti Sardinia, ebe jupụtara n'ụsọ osimiri, obodo ndị mara mma na obodo akụkọ ihe mere eme.
Ebe 5 pụrụ iche iji gaa ụkwụ
Iswa jupụtara na ebe ndị ejiri mma pụrụ iche gọzie ma ọtụtụ n'ime ha nọ n'ime ime obodo ...
Obodo Algarve ịga leta ndịda Portugal
Ndị a bụ ụfọdụ obodo na obodo ndị kacha mkpa dị na ndịda Portugal, nke a maara dịka Algarve, ebe ndị njem nlegharị anya.
Mmehie ndị dị a doaa ka anyị na-emekarị mgbe anyị na-eme njem?
Na edemede nke taa anyị na-agwa gị ihe m mehiere mgbe anyị na-aga ebe ọzọ. Egbula ha ọzọ!
Chọpụta obodo mara mma ise na Rías Baixas nke Galicia, mpaghara jupụtara na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri nwere àgwà dị ukwuu.
N’isiokwu nke taa anyị ewetara gị listi ọkpụkpọ egwu kacha mma na njem. Echefula na ezigbo egwu na njem ... Ka anyi gwuo egwu?
Choputa ihe ncheta iri ndi ozo ka anyi ghara ida n’ime njem anyi n’uwa nile, tinyere obodo ochie.
20 n'ime ihe ncheta ndị eletaworo n'ụwa kachasị m
Taa, anyị gosipụtara gị ihe ncheta iri kachasị mma n'ụwa nke anyị chere na ị kwesịrị ileta, ndepụta nke ebe ndị mara mma.
Ebe 7 mara amara na Portugal
Chọpụta ebe 7 amachaghị na Portugal, ebe nke nnukwu mmasị na-abụghị ndị ewu ewu mana nke ahụ bụ ọla ọma.
Ọ ga - amasị gị ịmara Lisbon na izu ụka ezumike na - esote na Disemba?
Ọ ga - amasị gị ịmara Lisbon na izu ụka ezumike na - esote na Disemba? Taa, anyị ewetara gị nnukwu atụmatụ a iji mara isi obodo Portuguese.
Anyị na-agwa gị nke bụ ebe anọ dị mkpa iji gaa na Portugal. Obodo anọ mara mma nke nwere ihe ncheta na mpaghara okike.
Anyị ahụworị ụzọ atọ mbụ nke O Camiño dos Faros, ụzọ pụrụ iche n'akụkụ ụsọ mmiri Galician na…
'O Camiño dos Faros' na Galicia na ọkwa asatọ m
O Camiño dos Faros bụ ọmarịcha njem njem na Galicia nke na-aga n'akụkụ ugwu ugwu n'etiti ọdịdị ala mara mma.
Osimiri mara mma, maka uto niile
Osimiri ndị ahụ abụghị naanị ọlaedo ma ọ bụ ọcha. Enwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, nwa, pink. Ọ bụ naanị ihe ị chọrọ ịmara na ịnụ ụtọ ha niile. Na-amaja?
Anyị na-egosi gị nkuku dị iche iche nke Galicia na onye ọ bụla kwesịrị ileta oge ụfọdụ, site na obodo ruo ebe okike.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ileta obodo mara mma, anyị ga-ewetara gị ọmarịcha onyinye maka ụbọchị ole na ole sochirinụ: Mara Ireland na ụbọchị 8 site na euro 344.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na nleta gị na Scotland
Chọpụta ihe ndị na-adọrọ mmasị iji hụ ma mee na Scotland, ala jupụtara na ihe omimi, akụkọ ihe mere eme na ụzọ jupụtara na nnukwu ụlọ.
Free Dublin, atụmatụ na echiche iji nwee ọ enjoyụ n’emefu ego
Choputa Dublin n’efu, uzo ị ga-esi nwee obi ụtọ na isi obodo Irish n’enweghị ego, maka ndị na-eme njem na mmefu mmefu.
Mara Bali maka ụbọchị iri site na euro 10
Kedu ihe gbasara: Mara Bali maka ụbọchị 10 site na euro 1.141! Onyinye a magburu onwe ya sitere na aka Destinia. Ga-eleta agwaetiti ahụ?
Leeuwarden na Valletta, isi obodo nke Europe nke 2018
Odiri awa abụọ site na Amsterdam, obodo Dutch nke Leeuwarden bụ ihe ama ama maka ọdọ mmiri ya na ọwa mmiri ya yana ...
Ebumnuche maka ezumike Halloween
Chọpụta ụfọdụ echiche maka ezumike akwa akwa maka ezumike na atụmatụ egwu.
Gaa na Florence na Ọktọba
Na-aga thistali n’ọnwa a? Ọktoba bụ ọnwa magburu onwe ya nke ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ. Jide n'aka na ị gara Florence n'ihi na enwere ọtụtụ ememme na-atọ ọchị na Ọktọba.
Ebe dị na London ma eleghị anya ị maghị
Chọpụta ebe ndị a na-amachaghị ama na obodo London, nleta ndị gafere atụmatụ ndị njem nleta kachasị.
Colosseum ga-emeghe ọkwa elu ya maka ọha na nke mbụ n'ime afọ 40
N'ịbụ onye Vespasian nyere ọrụ ma nwa ya Titus mezuru na 80 AD, Colosseum bụ akara nke…
Ihe mere ị ga-eji gaa Galicia n'oge mgbụsị akwụkwọ
Chọpụta ụfọdụ ihe kachasị mma iji gaa Galicia n'oge oge mgbụsị akwụkwọ, yana ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee.
Ọ ga-amasị gị ịga otu n'ime ebe oyi a?
Ajụjụ anyị na-ajụ gị taa dị mfe: you chọrọ ịga otu n'ime ebe oyi a? Kedu nke ị banyegoro?
Ebe mmasị na Gran Canaria
Chọpụta nnukwu ebe ndị a nwere mmasị n'àgwàetiti Gran Canaria, agwaetiti nwere saịtị ndị sitere n'okike, ebe akụkọ ihe mere eme na saịtị.
Nwee obi ụtọ Cheste MotoGP Grand Prix site na euro 189
Taa, anyị na-ewetara gị a dị iche iche na-enye, ezigbo maka ndị Fans nke ọgba tum tum: Cheste Moto GP Grand Prix si 189 euro.
Na Paseo del Prado na Madrid ị ga-ahụ ihe a maara nke ọma dịka 'triangle art' ma ọ bụ ...
Taa, anyị na-ewetara gị njem na-atọ ụtọ nke ukwuu maka Puente del Pilar: lightgbọ elu na ụlọ nkwari akụ na London maka naanị 320 euro. Debanyere aha?
Chọpụta ihe na-atọ ụtọ 9 iji hụ ma mee na Toulouse, obodo mara mma nke France nke jupụtara na ebe ngosi ihe mgbe ochie, nka na ụlọ mara mma.
Ryanair gbatịrị ụgbọ elu ya kagburu ruo ọnwa Machị 2018
Ryanair na-eme ya ọzọ: ọ gbatịrị ụgbọ elu ya kagburu ruo Machị 2018. N’ebe a ka anyị na-agwa gị nke ụzọ 34 ga-emetụta mgbagha ndị a.
Nleta dị mkpa 6 na obodo Florence
Chọpụta nleta dị mkpa dị mkpa na obodo Florence nke Italiantali, otu n'ime ebe ndị kachasị eleta maka nka na ihe ncheta niile o nwere.
Kporie ihe dị iche iche na-akwụghị ụgwọ na obodo Lisbon. Gbanwee mmefu ego gị site na ịgbakwunye ọrụ ndị a n'efu na njem.
Ndị a bụ ụfọdụ ụgbọ elu ndị ụlọ ọrụ Ryanair kagburu. Ndepụta anyị na-aga ruo Ọktọba 1 mana anyị na-etinye njikọ ya na onye ọ bụla.
Agwaetiti ndị mara mma nke Europe iji gaa njem
Anyị na-enye gị echiche ole na ole iji mee atụmatụ njem gaa ụfọdụ n'ime agwaetiti Europe ndị kacha ewu ewu n'oge ahụ, site na Ibiza ruo Crete.
Onyinye taa dị "kemmiri": Site na Seville na Rome, njem njem, maka naanị euro 169. Njem na Ryanair si Skyscanner.
Obí nke Infante Don Luis de Boadilla del Monte
Otu n'ime ihe ncheta ndị Spain amachaghị bụ Palacio del Infante don Luis na Boadilla del Monte. A chọtala ya…
Ihe ị ga-ahụ ma mee na obodo Brussels II
Chọpụta ihe ndị ọzọ ị ga-ahụ na ime na obodo Brussels. Ebe ndị ọzọ iji gbakwunye na ndepụta ahụ na nnukwu ogige ntụrụndụ, obí eze na ebe ngosi ihe mgbe ochie.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na obodo Brussels I
Chọpụta ihe ị ga-ahụ ma mee na obodo Brussels, obodo akụkọ ihe mere eme na nke oge a juputara na oghere ndị na-atọ ụtọ na nleta ndị dị mkpa.
Ebe njem kachasị mma na Europe dị ka TripAdvisor si kwuo
Anyị ga-ahụ ụfọdụ ebe ndị njem na-adọrọ mmasị na Europe, yana ihe ncheta na ebe ndị dị mkpa maka ndị njem.
Ebe 5 ma obu ihe ncheta nke mgbanwe ihu igwe na-eyi egwu
Ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ụwa ebuola amụma na ka ọ na-erule afọ 2100, oke osimiri nwere ike ịrị elu ma tinye ...
Ebe mara mma ileta na France
Chọpụta ụfọdụ ebe mara mma ma maa mma dị na France, site n'okporo ụzọ site na nnukwu ụlọ ruo obodo ochie na obodo nta.
Ahịa: undgbọ elu Roundtrip na Paris site na euro 32
N'ime onyinye taa anyị ewetara gị ezigbo ahịa: ụgbọ elu Roundtrip na Paris site na euro 32 site na ọdụ ụgbọ elu dị iche iche nke Spain.
Anyị na-egosi gị ụfọdụ n'ime obodo ndị kachasị mma mara mma na Andalusia. Nhọrọ nke obere obodo ileta.
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na nnukwu obodo Belfast, yana ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nsogbu n'oge gara aga, taa ọ bụ obodo nke oge a.
Chọpụta echiche ole na ole maka ịhọrọ njem njem ọdịda a, site na ogige ntụrụndụ, gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ obodo Europe.
Peru ga-ejedebe ịnweta Machu Picchu iji kpuchido ya site na njem nlegharị anya
N'oge na-adịbeghị anya anyị kwuru banyere otu gọọmentị ime obodo na Venice sirila mee usoro iji chebe Plaza ...
Alhambra na Granada ga-emepe ogige Generalife n'efu
Kemgbe oge opupu ihe ubi, ndị hụrụ Alhambra na Granada akwụsịbeghị inwe ozi ọma na mmekọrita ...
Ihe kpatara ịhọrọ ebe ime obodo ezumike gị
Chọpụta ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma iji họrọ oke ime obodo na ezumike ọzọ gị, ebe dị jụụ na okike.
Atụmatụ ịhụnanya na Madrid
Madrid bụ obodo na-enye anyị ihe na-adịghị agwụ agwụ ịhụ ma mee ma ọ bụrụ na anyị gaa dị ka di na nwunye ...
Kedu ihe pụtara agba agba?
Mgbe ị na-amalite njem na mba ọzọ, paspọtụ bụ akwụkwọ ozi mmeghe anyị. Ozi ya ...
Mbara mmiri 16 kachasị mma na Madrid
Ndị nwere ohere ịnọ ụbọchị ole na ole na Madrid n'oge ọkọchị ga-enwe ike ịchọpụta na abalị ahụ ...
Foodgbọ ala nri kacha mma na New York
Kpochapụwo mgbe a na-eri nri na New York bụ gwongworo na-eri nri. Okporo ámá n'okporo ámá, ma na-esi ísì ụtọ niile nke ụwa ma na ọnụ ahịa dị mma.
Gaa na ebe dị iche iche na Spain ebe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu: Guadalajara, Girona, Seville, Cáceres, Peñíscola, wdg.
N'ime ọnwa nke July, Barcelona kwadoro ụtụ isi njem njem maka njem, nke a ga-agbakwunye na ndị ...
Na edemede nke taa anyị ewetara gị ozi na-adịbeghị anya maka ndị njem: Obodo Mexico dị na 'n'elu 1' nke ogo ogo akwụkwọ njem Travel + Leasure.
Choputa obodo 9 a mara mma nke di na ala Spanish, obere nkuku ebe enwere otutu ihe ichoro.
Irughari ubochi asatọ n’ime MSC Splendida site na euro 8
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị ga - aga njem ụgbọ mmiri wee gafee obodo Spanish na Itali, nke a bụ ohere gị. Site na euro 649 ọ nwere ike ịbụ nke gị!
Obodo 20 mara mma na Galicia II
Choputa obodo iri ndi ozo mara nma na Galicia na nhoputa nke abuo nke obere ebe ichoro na ala a mara nma.
Onye ọ bụla bi na Madrid nwa oge ga-achọpụta ị drinkingụ vermouth ma ọ bụ vermouth na ...
Ga njem bụ ahụmịhe na-enye afọ ojuju. Ọ na-emeghe uche ma nye ohere ịmara ụzọ ndụ ndị ọzọ. Mba niile ...
Chọpụta iri kacha elu na obodo iri na abụọ mara mma na Galicia. Ebe nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye na obere nkuku.
N’akụkọ ihe mere eme nile, ọ dị mwute ikwu na a na-akpa ókè megide ụmụ nwanyị n’ihi mmekọahụ ha na agbanyeghị ...
Chọpụta ụdị ejiji ndị eji eme Ecuador dabere n’ógbè ahụ. Olee otú ndị ala ọzọ na-aga ebe ahụ si eji ejiji? Chọpụta!
Mee ego iji mata Prague na Budapest: Site na euro 378, nnabata na ụgbọ elu
N’isiokwu nke taa, anyị ga-ewetara gị njem njem iji banye n’obi Europe: Mara Prague na Budapest: euro 378, nnabata na ụgbọ elu
Mara omenala ndị India ma chọpụta ọdịnala nke ndị Hindu n'okpukpe, gastronomy, ememme na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Chọpụta asaa ịrịba eke na saịtị na Europe na-efu na gị ọzọ ezumike, si ọzara ka ọdọ mmiri na osimiri.
Uwe ejiji nke Brazil
Chọpụta ụdị ejiji ndị Brazil, na uwe ha na-eyi dabere na oge nke afọ na mpaghara. Kedu uwe ndị Brazil? Chọpụta ya ebe a!
Paspọtụ kacha mma na nke kacha njọ iji gaa ụwa
Otu n'ime nchegbu ndị njem nleta ọ bụla na-eme mgbe ọ na-aga mba ọzọ bụ ma ị ga-aga ...
Chọpụta ihe niile na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ị nwere ike ime na Galicia n'oge ọkọchị, ebe njedebe na-ewu ewu.
A na-ewere ọgwụ dị ka mkpụrụ osisi na-esi ísì ụtọ n'ụwa, gịnị bụ isi ya? Anyị na-agwa gị ihe nzuzo niile nke mkpụrụ osisi a na-esi isi ọjọọ.
Ga Punta Cana naanị euro 690, ihe niile gụnyere
Gaa Punta Cana naanị euro 690, ihe niile gụnyere onyinye a nke anyị họọrọ maka weebụsaịtị Rumbo.
WorldPride Madrid 2017, nduzi doro anya maka ndị otu Nganga
Site na July 23 ruo 2, Madrid nwere ọtụtụ ememme. N'okpuru motto «whohụnanya onye ị hụrụ n'anya, Madrid ga ...
Ofufe na-anọ na Tenerife si 118 euro na Destinia
Taa na-enye anyị nwere ike ikwu na ị na-aga Tenerife: Ofufe na-anọ na Tenerife si 118 euro na Destinia. Nweta ọtụtụ ihe na ezumike gị!
Gaa na obodo ndị dị nso Porto
Anyị na-egosi gị ụfọdụ echiche na-atọ ụtọ iji mee njem gaa obodo ndị dị nso na Porto, ebe ndị nwere nnukwu mmasị nwere ike ịga leta n'otu ụbọchị.
Oge ezumike na Bratislava
Nwere mmasị na Bratislava? O dikwa ka ihe omimi na Middle Ages? Ya mere, gaa na ya n'ihi na ị gaghị enwe mmechuihu: ụlọ, ụka, ọdọ mmiri na oge ochie.
Ihe ịhụ ma mee na Hamburg
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na obodo German nke Hamburg, obodo mara mma nke nwere ọtụtụ nleta dị mkpa.
You na-aga ileta New York ma chọọ ịma nke bụ ụlọ ahịa kachasị mma na Fifth Avenue a ma ama? Ọ dị mma, echefula ndu anyị maka ịzụ ahịa na NY
Na Riviera Maya enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee, site na ndakpu n'ime mmiri wee gaa na mkpọmkpọ ebe Mayan, ịrị pyramid ma ọ bụ igwu mmiri na cenotes.
Osimiri 10 dị na Spain iji laa n'iyi n'oge okpomọkụ a
Chọpụta oke osimiri iri dị na Spain na anyị ga-achọ ịhapụ oge okpomọkụ a. Arenales nke na-esi site na ugwu ruo na ndịda na-agafe agwaetiti.
Katidral-alakụba nke Córdoba saịtị kachasị mma nke ndị njem nleta na Europe 2017
Spain bụ otu n'ime mba ndị na-adọta ndị njem nleta kwa afọ n'ihi oke mma nke gastronomy, ọdịbendị, ...
Chọpụta akụkụ niile anyị na-agwa gị ịbịa nleta na Edinburgh, obodo jupụtara na amara na ihe ncheta.
Inweta Nicaragua, pel ndị Central America
Enwere uzo ole na ole ebe ndi njem nlegharị anya di nma ma di nma dika Nicaragua. N'ime ya ...
Akụ pụrụ iche na Galician Rías Baixas
Anyị ga-achọpụta ụfọdụ akụkụ pụrụ iche nke Galician Rías Baixas, nke nwere nsụda mmiri, agwaetiti na nnukwu ụlọ iji gaa.
EDreams na-enye gị onyinye taa kwa izu: njem si Madrid gaa Havana maka naanị euro 700. Lee ọnụ ahịa dị na ya!
Ọ́ bụrụkwanụ na anyị agawa nọrọ ebe ọzọ ka anyị biri?
N'isiokwu taa anyị na-eme ka ị chee ma tụgharịa uche ... Kedu mpaghara mpaghara ị ga - ahọrọ ọ bụghị naanị njem, kamakwa ịnọ?
Funlọ ihe ngosi nka 5 na-atọ ụtọ ileta na ụmụaka na ndụmọdụ maka ịme ya
Na Mee 18, e mere ncheta Museumbọchị Ngosi Ihe Nchịkwa Mba Nile, ụbọchị zuru oke iji cheta na ...
Gaa na obodo nke Bologna na Italy, ihe ịhụ
Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Bologna na nleta nke obodo ahụ jupụtara na ụlọ elu ma marakwa maka arcades ya.
Osimiri kacha mma na Seychelles
Anyị ga-aga agwaetiti Seychelles ịmara ụfọdụ n'ime osimiri ndị kacha mma, ihe ndị dị mkpa anyị ga-aga ma mara.
Pgbọ njem njem ahụ laghachiri ime Camino de Santiago na 2017
Kemgbe ụwa, ọtụtụ okpukpe na-ejegharị ejegharị na ebe dị nsọ. Itzọ njegharị ndị a nwere ihe ha pụtara ...
Chọpụta ihe niile ị ga - ahụ n’ime ọtụtụ ụbọchị n’obodo Italy nke Siena, obodo amara maka emume Palio.
Obodo nta nke Aix-en-Provence bụ ebe mara mma n'ezie na ndịda France, nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma mee.
Ogwu na-atọ ezigbo ụtọ, nke a bụ gastronomy Greek
Ihe nri Mediterenian na otu nri kwesiri ekwesi nke na enye otutu aru ike nye ndi ...
Gaa Carcassonne, France, ihe ị ga-ahụ
Obodo Carcassonne ma ọ bụ Carcassonne dị na ndịda France ma ọ bụ obodo echekwara nke ọma ma dịkwa mma nke ukwuu.
Ihe ịhụ na Fuerteventura
Chọpụta ọtụtụ ihe ị nwere ike ịhụ ma mee n'àgwàetiti Fuerteventura, site n'ụsọ osimiri gaa n'okirikiri ala na obodo ndị mara mma.
Nri 5 ị na - enweghị ike ịkwụsị ịnwale na Buenos Aires
Buenos Aires nke dị na? Iri! Dị ka obodo nke ndị kwabatara, nri niile na-anọchi anya ya, mana tụọ nri ise ndị a na-agaghị anabata.
Mee izu ụka ogologo oge: Fgbọ elu tinyere ịnọ na Istanbul maka abụọ maka euro 399
Taa, anyị na-ewetara gị onyinye ọhụrụ nke ga-adọta uche gị: Flight gbakwunyere ịnọ na Istanbul maka abụọ maka euro 399 na Destinia.
Ihe 9 iji hu ma mee n'efu na Berlin
Kporie ndepụta nke ihe iji hụ ma mee n'efu na obodo Berlin, n'ihi na enwere ike ịnụ ụtọ ihe ndị kachasị mma na enweghị ọnụ.